Gary Neville oo dab ku sii shiday wararka ku saabsan mustaqbalka tababare Solskjær ee kooxda Man United - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
October 14, 2021 at 18:09 Gary Neville oo dab ku sii shiday wararka ku saabsan mustaqbalka tababare Solskjær ee kooxda Man United2021-10-14T18:09:15+02:00 CAYAARAHA
(Manchester) 14 Ok 2021. Xiddigii hore kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa ku adkeystay in tababare Solskjær ay tahay inuu hagaajiyo wax qabadka kooxda, iyo in tababaraha reer Norway looga baahan yahay inuu koob kula guuleysto Cristiano Ronaldo kooxdiisa hadda.
Tababaraha reer Norway kuma guuleysan koobab tan iyo markii uu qabtay Red Devils sanadkii 2018, qaar badan ayaana dareensan in xilli ciyaareedkan ay noqon karto fursadiisii ​​ugu dambeysay, gaar ahaan ka dib markii uu kooxda ku xoojiyay qandaraasyo badan oo xoog badan.
Haddaba Gary Neville oo la hadlayay shabakada Sky Sports, ayaa wuxuu yiri:
“Haddii Ole Solskjaer uu ahaan lahaa tababaraha kaddib xilligii Sir Alex Ferguson, waa la ceyrin lahaa, laakiin waayo -aragnimada xun ee sanadihii la soo dhaafay iyo ceyrinta tababarayaal badan, kooxdu waxay dooneysaa inay sii ballaariso mashruuca Solskjaer muddo dheer.”
“Dhibaatada uu Solskjaer wajahayo ayaa ah imaatinka Ronaldo, mashruuciisa wuu guulaysan doonaa ama wuu fashilmi doonaa, waa inuu ku guuleystaa koob, taas oo ah qodob muhiim ah, Ronaldo uma imaan inuu ku guuleysto kaalinta saddexaad ama afaraad.”
“Qodobka labaad ayaa ah waxqabad, sababtoo ah heerka uu ilaa hadda soo bandhigay ayaa u muuqda mid daciif ah haddii aad is bar-bar dhigto heerka Manchester City, Liverpool iyo Chelsea oo aan u malaynayo in ay u tartami doonaan horyaalka.”
« Dhageyso: Qareenka Somalia oo sharxay cabirka dhul-badeedka ay Soomaaliya heshay iyo kan Kenya
Xiddig ka tirsan Manchester City oo dhaawacmay & mudada uu maqnaanayo oo la sii ogaaday »